Raise Awareness of Child Labour by Music | Wire News Services
Ikhaya » Iinkonzo zeendaba zeWire » Ukuphakamisa ukuLumkisa ngokuSetyenziswa kwaBantwana nguMculo
Ukuphakamisa ukuLumkisa ngokuSetyenziswa kwaBantwana nguMculo
Olu khuphiswano lujolise ekusebenziseni amandla omculo ukunceda ukulwa ukuqeshwa kwabantwana, okuchaphazela abantwana abazizigidi ezili-152 kwihlabathi liphela.
I-Music Against Child Labour Initiative, edibanisa iimvumi ukuzisa ulwazi ngokuqeshwa kwabantwana, iphehlelela ukhuphiswano lwengoma ngomhla we-3 kweyoMdumba yowama-2021 ukuphawula uNyaka weZizwe eziManyeneyo wokupheliswa kwemisebenzi yabantwana.
Iimvumi zazo zonke iintlobo ziyamenywa ukuba zingenise ingoma ukukhuthaza oorhulumente kunye nabachaphazelekayo ukuba bathathe inyathelo lokuphelisa ukusetyenziswa kwabantwana, okuchaphazela phantse umntwana omnye kwabali-1 kwihlabathi liphela.
Ngelixa ukuqeshwa kwabantwana kwehle phantse ngeepesenti ezingama-40 kule minyaka ingamashumi amabini idlulileyo, ubhubhane we-COVID-19 usongela ukuguqula loo nkqubela.
IPhulo loMculo loMhlaba eliChasene nokuSebenza kwaBantwana, elasungulwa ngo-2013 yi-ILO, i-JM International kunye ne-International Federation of Musicians (FIM), kunye neemvumi ezaziwayo kunye namaqabane aphambili kwilizwe lomculo zineenjongo ezimbini eziphambili: kukwazisa abantu ngokuqeshwa kwabantwana umculo, kunye nokuxhobisa abantwana, kubandakanya abantwana ngaphambili ekusebenzeni kwabantwana, ngomculo.
Olu hlelo lokuqala lwokhuphiswano lwengoma lwenzeka ngenkxaso yeprojekthi yeCLEAR Cotton exhaswa ngemali yiKhomishini yaseYurophu kwaye yaphunyezwa yi-ILO ibambisene ne-FAO.
Iimvumi zinokungenisa ukhuphiswano lwazo kwelinye lala macandelo mathathu: icandelo lehlabathi kubo bonke amagcisa; Udidi olusisiseko lweeprojekthi zomculo ezibandakanya abantwana abachatshazelwa ngumsebenzi wabantwana; kunye neprojekthi yeCLEAR Cotton yokhuphiswano lukazwelonke oluqhutywa eBurkina Faso, eMali, ePakistan nasePeru, apho iprojekthi isebenzisana namaqabane ukulwa abasebenzi kunye nokunyanzelwa kwabasebenzi kwikotoni, impahla elukiweyo neempahla.
Abaphumeleleyo baya kukhethwa liqela leengcali zobugcisa kunye nezomculo, ngokusekwe kumgangatho womculo, ukubaluleka komyalezo, ukuqala kwengoma, kunye nokubandakanywa komnxeba. Amangenelo aya kujongwa ngumqambi ophumelele amabhaso u-AR Rahman kunye namanye amagcisa aphuma kwihlabathi lomculo.
"Amandla omculo alele kwisakhono sabo sokwenza abantu bazive beziva iimvakalelo ezithile, ukunxibelelana nokusidibanisa," utshilo uRahman.
Abaphumeleleyo baya kunikwa ibhaso lemali, ividiyo eshicilelweyo yengoma yabo; kunye nethuba lengoma yabo yokuba yinxalenye yomsitho weHlabathi wokuChasene nokuSebenza kwaBantwana ngoJuni 2021. Umhla wokugqibela wokhuphiswano ngowe-12 Epreli 2021.
Olu khuphiswano luqhutywa ngumbutho womculo wolutsha wehlabathi IiJeunesses Musicales zamanye amazwe ngentsebenziswano noMbutho wabaSebenzi weHlabathi, phantsi kwe-Initiative yoMculo.
Ngolwazi malunga nokhuphiswano kunye nendlela yokungena, ndwendwela: www.musicagainstchildlabour.com
Iprojekthi ecacileyo yomqhaphu, exhaswa ngemali yi-European Union yaza yaphunyezwa yi-ILO ibambisene ne-FAO, ilwa nokuqeshwa kwabantwana eBurkina Faso, eMali, ePakistan nasePeru ngokuxhasa iinzame zoorhulumente, amahlakani asekuhlaleni kunye nabadlali becandelo lomqhaphu kwinqanaba lesizwe kunye nokuxhobisa uluntu kunye nabachaphazelekayo.
JM wamanye amazwe
IiJeunesses Musicales zamanye amazwe